Maalinta: Juun 3, 2013
Heshiiska Iskaashiga Dadweynaha iyo Isgaarsiinta Gaarka ah ee TÜDEMSAŞ
Soosaarka iyo hagaajinta maraakiibta xamuulka tan iyo sanadkii 1939, waaxda tareenka ee noocyada kaladuwan iyo gawaarida xamuulka qaada ee TÜDEMSAŞ iyo shirkadda saadka Reysaş Gaadiidka iyo Saadka. [More ...]
Booqo TCDD, mid ka mid ah carruurta Turkiga: 11. International Turkish Olympics danjirayaasha iskaa wax u qabso Turkish, Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) soo booqday. Atatürk House, Matxafka Tareenka, Atatürk Wagon iyo Xawaare aad u sareeya ee halganka Qaranka [More ...]
Gaziantep Metropolitan 13 ayaa malaayiin dad ah ku waday taraam
Gaziantep Metropolitan 13 waxay ku daabacday malaayiin dad ah tareenka: Gaziantep Metropolitan Municipal 2012 kun 62 tareenka ee 497 oo leh 12 kun 915 kun oo 884 qof, 703 kun oo kilomitir 391 [More ...]
size dhaqaale mashaariic ahee Turkey ayaa sii badnayeen dakhliga qaranka ee 130 dalka. : Sanadihii la soo dhaafay, Turkey gaadiidka, kaabayaasha, tamarta iyo difaaca dar dar geliyay in ay ka-mashruuc ahee. Wareegtadan dhexdeeda, Kanal Istanbul, Marmaray, [More ...]
Jirdilka Gawaarida ee Baaskiilada
Jirdilka Gawaarida Basbaaska ee Rakaabka Diyaaradaha: Gaaska basbaaska leh ee la tuuray intii ay socdeen mudaaharaadyada lagu bilaabay Taksim Gezi Park ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay rakaabkii ku sugnaa Ankara. Saldhigga metrooga ee Fagaaraha Kızılay waa a [More ...]
Madaxweynaha FIATA Stanley Lim: "Caalamku waxa uu ka hadlayaa Turkey"
13-18 Markii labaad ee udhaxeysa Oktoobar 2014, Xiriirka Caalamiga ah ee Xiriiriyaasha Gaadiidka - FIATA Madaxweyne Stanley - Madaxweynaha FIATA Stanley, oo u yimid Istanbul si uu uga qeyb galo Shirka loo yaqaan 'FIATA World Congress' oo ay martigelisay UTİKAD ee Istanbul. [More ...]
RayHaber 03.06.2013 Warbixinta Shirka
Dayactirka, hagaajinta iyo rinjinta rinjiyeyaasha degsiimooyinka xargaha
Tareenka Taksim ayaa weli la xidhay
Tareenka dhulka hoostiisa ee Taksim wali waa xiran yahay: Hacıosman - Taksim tareenka dhulka hoostiisa ee Taksim wali waa u furan yahay inuu shaqeeyo inkastoo ay tahay maalin shaqo. In kasta oo Hacıosman - Taksim metro station ay tahay maalin shaqo [More ...]
Wejiga koowaad ee Nidaamka Tareenka Magaalada (ADARAY) waxaa daah furay Dawlada Hoose ee Magaalada Sakarya ee u dhaxaysa Adapazarı iyo Arifiye. Kuxigeenka Xoghayaha Guud Fatih Turan ayaa yidhi, t Allm Dhamaan u diyaar garowga ADRAY aad loo filayo [More ...]
Cusboonaysiinta Tareenka Tareenka ee Bismil, Diyarbakir
Cusboonaysiinta Wadooyinka Tareenka ee Bismil, Diyarbakır: Laanta bismil ee howlaha dib-u-cusboonaysiinta tareenka ayaa ka bilaabmay xarunta Diyarbakır, Guddoomiyaha Vehbi Bakır, 5. Saraakiisha Gobolka iyo Taliyaha Bismil Garrison ayaa ka soo qeybgalay. Tukashadu waxay ku bilaabataa furitaanka [More ...]
Saldhigga Tareenka Xawaaraha Sare ee Gürsulular Ficilcelinta Joojinta: Saldhig xawaare sare leh oo ku yaal Bursa si loo baajiyo tareenka xawaaraha sare Gürsulular wuu xanaaqsan yahay. Faruk, mid ka mid cilmiga cilmiga bulshada ee machadka Seventh City Institute of Gürsu Organised Zone Zone [More ...]
Wagooyooyinka Tareenka Xawaaraha Sare ee Xawilaadaha Loo Qaadey
line ugu weyn ee Turkiga-xawaaraha sare ee tareenka Ankara-Istanbul Speed ​​Tareen Project High, oo ay sii waddo shaqada dhismaha ee kasii goynta Eskisehir Istanbul, dhaqaaqin baabuur baabuur. Khad qadiimi ah oo u dhexeeya Eskisehir iyo Istanbul [More ...]
Kayseri ayaa ku guuleysatay garoonka cagaaran ee kubadda cagta ee 15 oo leh khadka taraamka
Kayseri, line taraamka 15 guuleystay meesha u dhiganta cagaaran in ay garoonka kubadda cagta Kayseri degmada Metropolitan ma aha in Turkey ah, line tareenka la dhaqanka ah ee dhif ah waa mid gaar ah ee dunida this çiçeklendirerek çimlendirip codsiga [More ...]
Codsiga internetka ee bilaashka ah ee nidaamka tareenka fudud ayaa laga fuliyay Samsun
Codsiga internetka ee bilaashka ah waxaa laga hirgaliyay Samsun nidaamka tareenka fudud. Codsiga xanbaarsan yahay ugu horeeyay ee noociisa ah ee Turkey. Haweeneydii ugu horreysay oo keliya ee adduunka oo ka shaqeysa aqoon-isweydaarsi ku saabsan warshadaha gaadiidka Wershadaha Mashiinka Korantada iyo Qalabka Korantada [More ...]
Maamulka EGO; Bus, Metro iyo Ankar waxay soo bandhigeen alaabta la iloobay
Maaraynta EGO; Waxyaabaha la ilaaway ee Basaska, Mita iyo Ankaray: Kuwii hilmaamay gaadiidkii dadweynaha ee Ankara waxay ka dhigteen kuwa arka "kuwa hadda lumay". Waxyaabaha la ilaaway waxaa ka mid ah buugga, boorsada jeebka, saacadda, muraayadaha, laptop, ilkaha [More ...]
Taageero ka timid Butso oo ah "Ololaha Tareenka"
Taageerida Ololaha Tareenka Xawaaraha Sare ee Tren oo ka socota Butso: Burdur Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (BUTSO) Madaxweyne Yusuf Keyik iyo Xubnaha Xubnaha ATSO tareenka degdega ah ee Antalya ka hor Expo 2015 [More ...]
Wasiir Yildirim: Ka shaqeynta Boosaasta Bosphorus
Wasiirka Yıldırım: Shaqada Buundada Bosphorus waxay bilaaban doontaa Dhamaadka Marmaray: Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta Binali Yıldırım wuxuu sheegay in shaqada buundada koowaad ay bilaaban doonto marka la dhameystiro mashruuca Marmaray. Gaadiidka, Badda iyo [More ...]
350 kun qof ayaa ku sii qulqulaya Kayseri
350 oo qof ayaa maalin walba lagu qaadaa Kayseri iyaga oo wata gaadiidleyda dadweynaha: KAYSERİ Dawlada Hoose; qaad iyo gaadiidka basaska, basaska iyo taraamka ee gaaska magaalada dabiiciga ah in nidaamka ugu fiican Turkiga gaadiidka dadweynaha [More ...]